အာဖရို-ယူရေးရှား - ဝီကီပီးဒီးယား
ကမ္ဘာဟောင်း ဟုခေါ်ဆိုကြသော အာဖရို-ယူရေးရှား (အေဖရိုယူရေးရှား၊ ယူရာဖရေးရှား သို့ ယူဖရေးရှား) သည် အရှေ့ကမ္ဘာခြမ်းတွင် တည်ရှိသော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးဆုံးသော ကုန်းမြေဖြစ်သည်။ ဆူးအက်ကျွန်းဆက်ဖြင့် ဆက်စပ်နေသော အာဖရိက နှင့် ယူရေးရှား (ဥရောပနှင့် အာရှ) နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်၍ ခေါ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ စူပါတိုက် ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသေးသည်။ အာဖရို-ယူရေးရှား သည် ဧရိယာစုစုပေါင်း ၈၄၉၈၀၅၃၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ ကျယ်ဝန်းကာ လူဦးရေ သန်း ၆ ထောင်ခန့် (ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၈၅% ခန့်) နေထိုင်ကြသည်။ အမေရိက၊ အန္တာတိက နှင့် အိုရှန်းနီးယား တို့အား ကမ္ဘာသစ် ဟု ခေါ်ဆိုသကဲ့သို့ အာဖရို-ယူရေးရှား ကို ကမ္ဘာဟောင်း ဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြလေသည်။
၈၄,၉၈၀,၅၃၂ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၃၂,၈၁၁,၁၆၆ စတုရန်းမိုင်)
၂.၁ ပထဝီဝင်အရ ဒေသများ
အာဖရိကနှင့် အာရှ တို့သည် ကုန်းမြေတံတားဖြင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၆ သိန်းကျော်ခန့်တွင် အာဖရိက သည် ဥရောပနှင့် အပြင်းအထန် တိုက်မိလိမ့်မည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ ထိုသို့ တိုက်မိမှုကြောင့် ဂျီဘရော်လ်တာ ရေလက်ကြား ပိတ်သွားကာ မြေထဲပင်လယ်သည် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ မှ သီးခြားဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၅ သန်းကျော်တွင်လည်း တောင်တန်းများလှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် မြေထဲပင်လယ် ကွယ်ပျောက်သွားလိမ့်မည်ဟု ယူဆထားကြသည်။
ယူရေးရှား (ဥရောပနှင့် အာရှ) နှင့် အာဖရိက တို့ကို ဆူးအက်တူးမြောင်းဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းအချက်အလက်များအရ ယူရေးရှား−မြောက်အာဖရိက နှင့် အာဖရိက ဆာဟာရဒေသ ဟူ၍လည်း ခွဲခြားခေါ်ဆိုကြသည်။
↑ The world’s languages, in7maps and charts။ WorldViews: The Washington Post (2015-04-23)။ 2015-04-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ အာဖရိကရှိ ဘာသာစကား ၂,၁၃၈ ခု၊ အာရှ ၂,၃၀၁ နှင့် ဥရောပ ၂၈၆ ခုပေါင်း ဖြစ်သည်။
↑ For example, Henry Field uses both terms in The University of California African Expedition: I, Egypt. American Anthropologist, New Series, Vol. 50, No. 3, Part 1 (Jul. - Sep., 1948), pp. 479-493.
↑ ကုလသမဂ္ဂ၏ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ခန့်မှန်းလူဦးရေစာရင်း ကို အခြေခံထားသည်World Population Prospects: The 2006 Revision (Highlights).
↑ Diamond, Jared (1997). Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. Norton & Company. ISBN 0-393-03891-2။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဖရို-ယူရေးရှား&oldid=501232" မှ ရယူရန်
၂၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၅:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။